Vokatry ny ezaka natao taona vitsivitsy izay, efa mipetraka ny tambazotra sy vovonana isitrahan’ny mpamokatra mpikambana anaty koperativa an’io varotra azahoan-tombony sady tsy mamono antoka ny mpamokatra io. Mivondrona anatin’ny RCC na Réseau du Commerce Equitable ireo Koperativa avy eto Atsinanana sy Analanjirofo toy ny FANÖHAGNA, MITSINJO, MAGNEVA, PAACO, KOVAPAMINA, mba ahafahan’ny tetik’asa mampahomby ny fiahiana sy fampahafantarana azy ireo.
Anisan’ny asan’ny Komity mpitarika ny AGRICOOP, ny mikarakara fihaonana hampifandraisana ireo mpian-tsehatra rehetra, ka notanterahina tamin’ity herinandro ity ny andiany faha-5 amin’izany « unité de liaison » izany.
Ny AVSF na Agronomes & Vétérinaire Sans-Frontière moa no mpanatanteraka an’ity tetik’asa ity.
Taom-piotazana lavanila: Tsy miova ny 15 jolay hisokafany ho an’Analanjirofo »